ब्रिटिश कोलम्बियामा सरकारी सहयोगकोको शरणार्थी बसोबास, सामाजिक एकीकरण र रोजगारका परिणाम/ उपलब्दीहरु
स्वागत छ! कृपया यस सर्वेक्षण सुरू गर्नु अघि तल दिएको सन्देश पढ्नुहोस्:
“ब्रिटिश कोलम्बियामा सरकारी सहयोगकोको शरणार्थी बसोबास, सामाजिक एकीकरण र रोजगारका परिणाम/ उपलब्दीहरु: भावी जनसंख्याको योजनाको लागि दशकको आगमनहरु प्रतिबिम्बित गर्दै” मा सहभागिताको लागी सहमति फारम
प्रिंसिपल अन्वेषक: डा. डैनियल हिबर्ट, भूगोल विभाग, ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय
१९८४ वेस्ट मल, वैंकूवर, बी. सी. क्यानाडा V6T 1Z2 dan.hiebert@ubc.ca
अनुसन्धान सहायक: ग्रेस न्यूटन, भूगोल विभाग, ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय
१९८४ वेस्ट मल, वैंकूवर, बी. सी. क्यानाडा V6T 1Z2 grace.newton@alumni.ubc.ca
प्रायोजक: यस अनुसन्धान अध्यागमन, शरणार्थी र नागरिकता क्यानाडाको अनुदानद्वारा वित्त पोषित छ
उदेश्य : यो परियोजनाले हामीलाई बिगत दस वर्षको अवधिमा ब्रिटिश कोलम्बियामा आइपुगेका सरकारी सहयोगको शरणार्थीहरूको एकीकरण अनुभव अझ राम्रोसंग बुझ्न मद्दत गर्नेछ। हामी, शरणार्थीहरू कसरी सामाजिक सेवाहरू प्रयोग गर्दछन् भनेर छानवीन गर्नेछौं, र हामी यी सेवाहरू उपयोगी हुन्छन हुन्दैन भनि मूल्यांकन गर्नेछौं। हामी शरणार्थीलाई यो पनि सोध्नेछौ कि उनीहरुले एकीकरण र सफलता बारे कसरी बुझ्दछन्, र हामी सफल एकीकरणमा आइपर्ने बाधा अड्चनहरु पनि पहिचान गर्नेछौं। यो जानकारीले हामीलाई संघीय स्तरमा शरणार्थी कानूनमा भएका परिवर्तनहरूले कसरी एकीकरणमा असर पारेको छ भनेर बुझ्न मद्धत गर्नेछ र ब्रिटिश कोलम्बियामा शरणार्थी एकीकरण सम्बन्धि कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हामीलाई सिफारिस दिनेछ।
अध्ययन प्रक्रियाहरू: तपाईंले क्यानाडामा तपाइँको बसोबासको अनुभव बारेमा बेनामी अनलाइन सर्वेक्षण पूरा गर्नुहुनेछ। सर्वेक्षणले लगभग १०-१५ मिनेट को समय लिनेछ, जसमा तपाइको काम, शिक्षा, र आवास सहित तपाइको दैनिक जीवन बारे सोध्नेछ। सर्वेक्षणको पूर्णतया पुरा तरिकाले वैकल्पिक छ, र तपाईं कुनै पनि समयमा यो सर्वेक्षणबाट आफ्नो सहभागिता छोड्न वा समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
परियोजना परिणामहरू: निष्कर्षहरू एकल-पृष्ठ सारांशको माध्यमबाट बहुविध भाषाहरूमा, सह-समीक्षा जर्नल लेखहरूमा, वेबिनारहरू, आदिमा वितरित गरिनेछ। नतिजाहरू ग्रेस न्यूटनको मास्टर थेसिसमा पनि समावेश हुनेछन् र, शरणार्थी र नागरिकता क्यानाडाको रिपोर्टमा पनि समावेश गरिनेछ।
संभावित लाभहरू: यो अध्ययनमा भाग लिन तपाईंले कुनै स्पष्ट लाभहरू पाउनु हुने छैन। तथापि, यो सर्वेक्षणले क्यानाडाको पूर्व सरकारी सहयोगको शरणार्थीको रूपमा तपाइको आफ्नो अनुभवहरुलाई साझा गर्न मौका दिनेछ। तपाईंको अन्तदृस्टीहरु पुनर्स्थापना अनुभवहरू सुधार गर्न आगामी सरकारी सहयोग शरणार्थीहरुमा प्रयोग गरिनेछ।
संभावित जोखिमहरु: मुख्य रूपमा, सर्वेक्षण प्रश्नहरू दैनिक जीवन बारे हुनेछ, र हामी आशा गर्दैनौं कि ती प्रश्नहरूले तपाईलाई कुनै किसिमको परेशानी हुनेछ। यद्यपि, तपाईं कुनै पनि समयमा र कुनै पनि कारणको लागि आफ्नो सहभागिता छोड्न वा समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले ती कारणहरु कसै सामु राख्नु/खुलाउनु पर्ने छैन। यदि अध्ययनले कुनै पनि समस्याहरू वा भावनाहरू जगाउछ/बढाउँछ, जसको लागि तपाइलाई सहायता को जरूरी पर्दछ, स्रोतहरू सर्वेक्षणको सुरुमा लिङ्क हुने छन्।
गोप्यनियता: हामी सर्वेक्षणको दौरानमा तपाईंलाई तपाइको नाम वा ठेगाना सोध्ने छैनौँ। सर्वेक्षण डाटा कम्प्यूटरयुक्त फाइलहरूमा पासवर्ड-सुरक्षित USB मा भण्डार गरिनेछ। प्रयोग नहुँदा यो लक गरिएको दराजमा भण्डारण गरिने छ। अध्ययनको अन्त्यमा, कुनै पनि भौतिक फारमहरू सील गरिएको लीफाफेमा राखिनेछ र पाँच वर्ष पछि नस्ट गरिनेछ।
भुकतानी/क्षतिपूर्ति: तपाइलाई सर्वेक्षण पूरा गर्न क्षतिपूर्ति बापत तलब वा भुक्तानी दिने छैन।
अध्ययनको बारेमा थप जानकारीको लागि सम्पर्क: यदि तपाईसँग कुनै प्रश्न छ वा अध्ययनको बारेमा थप जानकारी चाहानुहुन्छ भने, डा. ड्यानियल हिबर्ट (dan.hiebert@ubc.ca) वा ग्रेस निउटन (grace.newton@alumni.ubc.ca) लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अध्ययन बारे कुनै पनि चासोहरु वा गुनासोहरु को लागि सम्पर्क: तपाईं यस अध्ययनमा सहभागी हुँदा, एक अनुसन्धान सहभागीको रूपमा तपाईको अधिकार र / वा अनुभव बारे कुनै चासो वा गुनासोहरु छ भने, ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयको, अनुसन्धान एथिक्स कार्यालयको अनुसन्धान सहभागी उजुरी लाइन ६०४-८२२-८५९८ मा वा यदि टाडा हुनुहुन्छ भने RSIL@ors.ubc.ca मा इमेल वा टोल फ्री नम्बर १-८७७-८२२-८५९८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
मन्जूरी: यस अध्ययनमा तपाइको सहभागिता पूर्ण स्वैच्छिक हुनेछ र तपाईं कुनै पनि समयमा अध्ययनबाट सहभागिता जनाउन वा तपाइको सहभागिता हटाउन सक्नुहुनेछ। "सर्वेक्षण शुरू गर्नुहोस्" क्लिक गरेर, तपाईं यस अध्ययनमा भाग लिन आफ्नो मन्जूरी वा सहमति दिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं १४-१७ वर्षको हुनुहुन्छ भने कृपया माथिको सन्देश आफ्नो आमाबाबु वा संरक्षकलाई पढ्न दिनुहोस । साथै कृपया तलको सन्देश पनि पढ्नु होस् ।
वयस्क आश्वस्त/सहमति फारम- सरकारी सहयोगको शरणार्थी अध्ययन
अध्ययन शीर्षक: “ब्रिटिश कोलम्बियामा सरकारी सहयोगको शरणार्थी बसोबास, सामाजिक एकीकरण र रोजगार परिणाम/ उपलब्दीहरु: भावी जनसंख्याको योजनाको लागि दशकको आगमनहरु प्रतिबिम्बित गर्दै”
अध्ययनको चार्जमा को छ? ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयको भूगोल विभागका प्रोफेसर डा. ड्यानियल हिबर्टले अध्ययनको चार्ज लिनुभएको छ। ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय, भूगोल विभागको स्नातक तहको छात्र ग्रेस न्यूटनले यस अध्ययनमा अनुसन्धान सहयोगीको रुपमा सहयोग पुर्याएको छ। अध्यागमन, शरणार्थी र नागरिकता क्यानाडाले यो अनुसन्धान को लागि अनुदान प्रदान गरेको छ। यदि मलाई यो अध्ययनको बारेमा कुनै किसिमको प्रश्न छ भने, म डा. हिबर्ट (dan.hiebert@ubc.ca ) र ग्रेस न्यूटनलाई (grace.newton@alumni.ubc.ca) सम्पर्क गर्न सक्नेछु।
निमन्त्रणा: मलाई यस अनुसन्धान अध्ययनमा भाग लिन आमन्त्रित गरिएको छ किनभने म क्यानाडाकोलागि पूर्व सरकारी सहयोगको शरणार्थी हुँ। निम्न पृष्ठहरू अध्ययनको वर्णन गर्दछ ताकि मैले निर्णय गर्न सक्छु कि म यस अध्ययनमा भाग लिन चाहन्छु वा चाहदैन। मेरो इच्छा अनुसार म यो अध्ययनमा सहभागिता जनाउन सक्छु । मेरो इच्छा बिपरित कसैले पनि यो अध्ययनमा मलाई सहभागीता गराउन सक्ने छैन र सहभागी नभएको खण्डमा रिसाउन पाउने छैन।
के म यस अध्ययनमा सहभागी हुनै पर्छ? मलाई यो अध्ययनमा भाग लिन आवश्यक छैन यदि म चाहँदैन भने। यदि मैले भाग लिन इछ्या जाहेर गरे भने पनि, म कुनै पनि समयमा भाग लिन रोक्न सक्छु। यदि म यो अध्ययनमा भाग लिन चाहन्छु भने, मलाई यो फारममा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिनेछ। यो अध्ययनमा भर्ना वा नामांकन गर्नु अघि मेरो आमाबाबु / अभिभावकले सहमति फारममा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। सहभागी फारममा हस्ताक्षर वा मन्जुरी गरे पनि, मैले भाग लिनु पर्छ भन्ने छैन। मैले निर्णय गर्नु अघि, मैले निम्न जानकारी सावधानीपूर्वक पढ्न र मेरो परिवारसंग छलफल गर्न सक्ने छु। मैले पनि यो बुझें कि यदि मलाई केहि कुराको स्पष्टता छैन भने म डा. हिबर्ट वा ग्रेस न्यूटनसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छु । म अध्ययनमा हुन सक्दछु, अध्ययनमा नहुन पनि सक्दछु, वा निर्णय गर्न बढी समय लिन पनि सक्नेछु। यदि म अहिले यो अध्ययनको लागि सहमत भए पनि, म पछि मेरो मन/इछ्या पनि परिवर्तन गर्न सक्छु, र म किन यो अद्ध्यन छोड्दै छु भनेर व्याख्या गर्न आवश्यक रहनेछैन। म शोधकर्ताहरुलाई मेरो अध्ययन सहभागिताको कुनै पनि समयमा कुनै पनि प्रश्न सोध्न सक्ने छु।
हामी यो अध्ययन किन गर्दैछौ? क्यानाडा सरकार सहयोगका शरणार्थीहरू ब्रिटिश कोलम्बियामा कसरी जीवन व्यतित गरिरहेका छन् भनि जान्नको लागि अनुसन्धानकर्ताहरूले यो अनुसन्धान गर्न लाइरहेका छन् । यो प्रक्रियालाई प्राय: एकीकरण भनिन्छ, जसमा जागिर कसरी प्राप्त गर्छन, बस्नको लागि ठाउँ कसरी खोज्छन, र मित्र कसरी बनाउँछन भन्ने कुरा पनि पर्दछ । यो अध्ययनले म क्यानाडा आइपुगे पछि मेरो दैनिक जीवनको कुरा बारे सोधनेछ र मलाई आइपुगेको बेलामा के-कस्ता कुराहरुले सहयोग पुराउन सक्थ्यो भन्ने बारे पनि आफ्नो अनुभव हरु साट्न मौका दिनेछ । अनुसन्धानकर्ताहरूले मेरो प्रतिक्रियाबाट क्यानाडाको पहिलो सरकार-सहयोगको शरणार्थी बन्न कस्तो हुँदो रहेछ भनि जान्ने छन् । यो अनुसन्धान ग्रेस न्यूटनको स्नातक थेसिस र आप्रवासन, शरणार्थी, नागरिकता क्यानाडाको रिपोर्टमा समावेश गरिनेछ।
यस अध्ययनमा मेरो के हुनेछ? यदि म यो अध्ययनमा भाग लिन छनौट गरे भने, मलाई मेरो विद्यालय, घर र पारिवारिक जीवन सहित दैनिक जीवनको केही प्रश्नहरू सोधिने छ । सर्वेक्षणले १०-१५ मिनेटको समय लिन सक्नेछ।
केहि खराब हुन सक्छ? यो सम्भव छैन कि यदि यो अध्ययनमा भाग लियो भने केही खराब हुनेछ। यद्यपि, यदि कुनै प्रश्नहरूले मलाई दुःखलाग्दो, डरलाग्दो वा असहज महसुस गराउछ भने, मलाई यी भावनाहरूको सामना गर्न मधत पुर्याउने संसाधनहरुको जानकारी दिने छ । म कुनै पनि समयमा यो अध्ययन छोड्न चाहन्छु भने, मलाई कुनै किसिमको करकाप वा जबर्जस्ति गर्न सक्ने छैन ।
अध्ययनमा हंदा मलाई के फाइदा हुन सक्छ? सर्वेक्षण पूरा गर्नाले मलाई सीधा सहयोग हुन्दैन। तथापि, अनुसन्धानकर्ताहरू मेरो जानकारी प्रयोग गरेर क्यानाडामा पुर्व सरकारी सहयोगको शरणार्थी हुन कस्तो महसुस हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउने छन्।
म अध्ययनमा छु भनेर कसले थाहा पाउने छन्? केवल मलाई, मेरो आमाबाबु, र अनुसन्धानकर्ताहरूले थाहा पाउनेछन् कि म अध्ययनमा छु। जब अनुसन्धानकर्ताहरू आफ्नो अनुसन्धान साझा गर्न तयार हुन्छन, उनिहरूले मेरो नाम वा अन्य जानकारी समावेश गर्दैनन् जसले गर्दा म अध्ययनमा छु भनेर अरूलाई थाहा पाउन सकुन।
अध्ययनको बारे केहि प्रस्न सोध्नु पर्यो भने मैले कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ? यदि अध्ययन अघि वा सहभागिताको बेलामा मलाई यस अध्ययनको बारेमा कुनै पनि प्रश्न हुन्छ वा थप जानकारी चाहिन्छ भने, मैले डा. हिबर्टलाई (dan.hiebert@ubc.ca) वा ग्रेस निउटनलाई (grace.newton@alumni.ubc.ca) सम्पर्क गर्न सक्छु।
यदि मलाई अध्ययनको बारेमा चासो वा गुनासो छ भने मैले कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ? यदि मलाई यस अध्ययनमा एक अनुसन्धान सहभागीको रूपमा मेरो अधिकार र/वा अनुभव बारे कुनै चासो वा गुनासो छ भने मैले, ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयको अनुसन्धान एथिक्स कार्यालयको अनुसन्धान सहभागी उजुरी लाइन ६०४-८२२-८५९८ मा वा यदि टाडा छु भने RSIL@ors.ubc.ca मा इमेल वा टोल फ्री नम्बर १-८७७-८२२-८५९८ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछु।
•मैले यो वयस्क आश्वस्त/मन्जुरी फारम पढेको र बुझेको छु।
•मलाई प्रदान गरेको जानकारी सम्बन्धि विचार गर्न अनि आवश्यक भएमा सल्लाहको लागि सोध्न पर्याप्त समय थियो।
•मैले प्रश्नहरू सोध्न मौका पाएको छु र मेरो प्रश्नहरूको लागि स्वीकार्य जवाफहरू पाएको छु ।
•म यो बुझ्छु कि सबै संकलन गरिएको जानकारीहरु गोपनीय राखीनेछ।
•म बुझ्छु कि यस अध्ययनमा मेरो सहभागिता स्वैच्छिक हुनेछ र मैले चाहेमा यस अध्ययनमा भाग लिन इन्कार गर्न वा कुनै पनि समयमा यो अध्ययनबाट निस्कन पाउनेछु ।
•म बुझ्छु कि म यो अध्ययनमा मेरो सहभागिताको सन्दर्भमा, कुनै पनि समयमा प्रश्न सोध्न जारी राख्न सक्छु।
•म बुझ्छु कि यदि मैले मेरो नाम यस फारमको अन्तिममा राखयो भने, म यस अध्ययनमा हुन सहमत छु भनि जनाउदछ । म यस अध्ययनमा सहभागी हुन सहमत छु।